Niditra an-tanety androany i… Francisco: dibo-drano noho ny oram-batravatra i Toamasina | NewsMada
Raha tsy nisy ny fiovana, tafiditra an-tanety ao atsimon’ny distrikan’i Mahanoro aninkeho maraina ilay faritra andro ratsy Francisco. Ny alakamisy teo anefa dia efa nampitondra takaitra an’i Toamasina sahady ny voka-dratsiny ; dibo-drano noho ny oram-batravatra ny ankamaroan’ny tanàna no sady niaina tao anaty haizina noho ny fahatapahan-jiro.
Tao anatin’ny iray andro monja dia dibo-drano tanteraka ny tanànan’i Toamasina. Nivatravatra ny orana tao Toamasina, hatry ny alakamisy teo. Nampatahotra ny mponina ny hatevin’ny orana sy ny rivotra nifofo. Dibo-drano ny faritra iva rehetra ao an-toerana. Voatery natsahatra ny fampianarana, omaly, tamin’ny toerana maro satria tsy voafehy intsony ny rano mihandrona, sahirana ny mpianatra, dobo ny sekoly sasany. Maro ny fahavoazana na ho an’ny fotodrafitrasa na ara-pitaovana. Nisy ny tetezana simba izay mihazo ny Hopitalibe. Nisy ireo olona tratran’ny orambe tampoka teny an-dalana ka safotra tampoka mihitsy noho ny hatsiaka…Niteraka fahatahorana sy fitaintainana teo amin’ny mponina iny orambe tampoka iny.
Nifanidran-dalana tamin’ izay ora-mikija niteraka ranobe izay ihany koa ny haizina nateraky ny fahatapahan-jiro. Ny alakamisy tontolo andro sy tontolo alina no tsy nandeha ny jiro tao an-toerana. Maizin-kitroka i Toamasina. Anisan’ny niaina tamin’ny haizina ny fokontanin’Ampasimazava, tsy nisy afa-nadeha ny fahitalavitra rehetra, raha tsy hilaza afa-tsy ny orinasan-tserasera roa izay tratran’ny fahasimban’ny “emeteur” noho ny fahatapahan’ny herinaratra.
Mbola hikija ny orana ao Toamasina
Omaly hariva, tany amin’ny 78 km atsinanan’i Vatomandry no misy ny foiben’ilay andian-drahona mitondra orana navelan’ilay rivodoza Francisco. Mitondra rivotra 55 km isan’ora miaraka amin’ny tafiotra manodidina ny 75 km isan’ora ity andro ratsy ity.
Mikisaka mianatsimo somary atsimo andrefana ny diany ka mahafaka 9 km isan’ora ny hafainganam-pandeha izay tena miadana tokoa.
Raha ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetry ny andro, hiditra an-tanety ao atsimon’ny distrikan’i Mahanoro izy, anio asabotsy ary tsy hiova firy ny heriny.
Tsy misy ny filazana mikasika ny rivodoza satria tsy ahina ho feno ny fepetra mikasika izany.
Mila mitandrina ny mponina voakasiky ny filazana amin’ny fahabetsahan’ny rotsak’orana satria mety arahina tafiotra mahatratra 70 km isan’ora izany amin’ny fotoana hidirany an-tanety, androany.
Fampitandremana miloko mena ho an’i Brickaville, Vatomandry, Mahanoro ary Nosy Varika
Filazana miloko mavo ho an’i Mananjary, Manakara, Vohipeno, Ifanadiana, Ikongo, Manampotsy, Marolambo, Mangoro
Filazana miloko maitso kosa ho an’Ambatondrazaka, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Andramasina, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I-II, Fandriana, Ambositra, Manandriana.
Tsy tokony hiandriaka intsony ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan’i Fenoarivo Atsinanana sy Manakara. Mila manaraka tsara ny toromarika omen’ireo manam-pahefana koa ny mponina rehetra voakasiky ny fahabetsahan’ny rotsak’orana.
Tatiana A sy Sajo